Kooxaha Ajax & Tottenham Oo Siddeed Dhamaadka UCL U Soo Baxay – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Arbaco, Marso, 06, 2019 (HNN)- Kooxda Ajax ayaa Real Madrid ceeb wayn ku soo baday Santiago Bernabeu kadib markii ay 4-1 ku soo xasuuqday isla markaana ay Ajax iska xaadirsay siddeed dhamaadka tartanka UEFA Champions League. Real Madrid ayaa guuldaro taariikhi ah kala kulantay Ajax kadib muddo 22 sanadood ah oo ay garoonkeeda guuldaro kaga soo gaadhin.
Ajax ayaa gabi ahaanba aduunka kaga yaabsatay qaab ciyaareedkii ay ku soo bandhigtay Bernabeu waxayna Real Madrid ku abuureen jaho wareer waali ah. Xili ciyaareedkii Real Madrid ee ku tiirsanaa Champions League ayay Ajax soo gaba gabaysay iyada oo hadda Solari uu mari doono dariiqii raggii ka horeeyay.
Dhinaca kale kooxda Tottenham ayaa Ajax kula biirtay wareega siddeed dhamaadka UEFA Champions League kadib markii ay guuldaro kale soo baday Dortmund.
Kaydka: Bruno Varela, Joel Veltman, Daley Sinkgraven, Dani de Wit, Zakaria Labyad, Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg.
Kaydka: Keylor Navas, Jesus Vallejo, Marcelo, Federico Valverde, Dani Ceballos, Marco Asensio, Gareth Bale.
Kooxda martida ahayd ee Ajax ayaa qaab ciyaareed layaableh ku soo bandhigtay Santiago Beranbeu waxayna qaybtii hore ee ciyaartu ahayd mid ay xataa jamaahiirta Madrid ka cabsadeen in ay kooxdoodu ceeb cusub la kulanto, waxayna Ajax abuurtay waji waali ah oo ay Santiago Solari iyo ciyaartoyda kooxdiisu ku jaho wareereen.
Qaybtii hore ee ciyaarta Real Madrid waxaa isku raacay saddex musiibo oo kala ah in laba gool laga dhaliyay, in laba jeer ay birtu iyaga goolal ka beenisay iyo in laba dhaawac soo gaadheen, waana min laba arimood oo soo koobayay wax walba oo qaybtii hore ee ciyaarta dhacay.
Daqiiqadii 6 aad BIRTA GOOLKA!! Real Madrid ayaa markiiba u muuqaday in ay goolka furitaanka heshay kadib markii uu Lucas Vazguez soo qaaday karoos cajiib ah isla markaana uu Varane si buuxda madaxa ugu darbeeyay laakiin Varane iyo ciyaartoyda Madrid ayaa arkay kubbada oo birta goolka Ajax ka soo booday!
Daqiiqadii 7 aad Ajax ayaa markiiba Real Madrid ku ciqaabtay goolka ay birtu ka beenisay waxaana goolka Bernabeu neefta dib ugu celiyay isla markaana jaho wareer wayn ku abuuray Madrid dhaliyay Hakim Ziyech kadib markii uu darbo ku taabtay goolka uu Courtois ilaalinayay waxaana qalad xun soo sameeyay Toni Kroos oo kubbada u lumiyay Dusan Tadic oo caawinta goolkan sameeyay, waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Ajax hogaanka kula wareegtay.
Daqiiqadii 17 aad Real Madrid ayaa markan heshay fursad kale oo ay goolka barbaraha ku keensan karta waxaana fursad wayn soo abuuray Lucas Vazguez laakiin Varane oo qaab cajiib ah kubbada ugu darbeeyay goolka Ajax ayaa markale arkay goolhaye Onana oo haddana fursadan ka beeniyay.
DAQIIQADII 18 AAD Alla Muxuu Gool Laga Hadli Doono Ahaa!! Kooxda Ajax ayaa si aan la rumaysan karin u keensatay goolkeeda laabad ee ay dhul gariirka kaga abuurtay Santiago Bernabeu waxaana farsamo layaableh Real Madrid ku ceebeeyay Dusan Tadic kaas oo bad wayn cadaan ah kubbada la sii jiidhay ka hor intii aanu isku saarin goolhaye Courtois iyo xidiga goolkan dhaliyay ee David Neres kaas oo inta uu dhinaca ka maray Courtois goolkan si qurux badan u dhamaystiray.
Xaalada ayaa noqotay mid aan la sharixi karin isla markaana ayna ciyaartoyda Real Madrid malaysan karin waxa Bernabeu ka dhacayay, jamaahiirta Real Madrid ayaa afka iyo madaxa gacmaha saaray waxayna arintani noqotay mid amakaag ku noqotay qof kastaba, ma aha goolka labaad oo kaliya, balse qaabka uu u dhashay ayaa xaalada waali ka sii dhigtay.
Waxaa lays waydiinayay miyayna Real Madrid ciyaarayn, miyayna ahayn kooxdii saddexda jeer ee xidhiidhka ahayd ku soo guulaysatay Champions League, waxayna dadku bilaabeen in ay ka shakiyaan waxa Bernabeu ka socday.
Daqiiqadii 22 aad Ajax ayaa ugu dhawaan dhalin gaadhay goolkeeda saddexaad kadib markii uu Dusan Tadic oo laba gool caawin ee hore sameeyay uu kubbad kale oo dilaa ah u bixiyay Neres laakiin goolhaye Courtois ayaa awooday in uu badbaadin fiican sameeyo.
Daqiiqadii 29 aad Musiibadu kali-kali uma timaado, waxaana bilawday xaalado kale oo jaho wareerkii Solari sii laba jibaaray kadib markii uu Lucas Vázquez dhaawac soo gaadhay waxaana ciyaarta soo galay Gareth Bale. Lucas Vázquez ayaa oohinta xejisan kari waayay wuxuuna baxay isaga oo ilmaynaya isla markaana madaxa gacmaha ku haya.
Daqiiqadii 35 aad Vinícius Júnior ayaa markale ka dhaawacmay Real Madrid kadib markii uu isku dayay in uu gool dhaliyo balse uu si xun ugu dhacay cidhifka goolka Ajax laakiin Vinícius Júnior ayaa muraaro dilaac la aamusiin kari waayay isaga oo u oyay si aan la rumaysan karin waxaana ciyaarta soo galay Marco Asensio.
Daqiiqadii 43 aad Birta Goolka!! Gareth Bale ayaa markan helay fursad fiican oo uu gool ku dhalin karayay laakiin markale isla birtii uu Varane darbada ku garaacay ayuu Bale arkay iyada oo gool kale ka beenisay kooxdiisa Madrid.
Ajax ayaa heshay fursado layaableh oo ay xataa goolal kale ku dhalin kartay laakiin qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 ay Ajax hogaanka ciyaarta ku haysay isla markaana ay waxyaabo layaableh ka samaysay Bernabeu halka Madrid ay ahayd koox magac ahaan oo kaliya garoonka u joogtay marka laga reebo fursadaha Varane iyo Bale birta ku garaaceen.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Real Madrid soo laabtay iyada oo isku soo dardaartay sidii ay ciyaarta ugu soo laaban lahaayeen isla markaana ay xili ciyaareedkooda ku badbaadiyaan laakiin Ajax ayaaba wali u muuqatay kuwo aan wax cabsi ah qabin.
Real Madrid ayaa fursado fiican heshay laakiin waxaa wali ku adkayd sidii ay uga faa’iidayn lahaayeen fursada aan badnayn ee ay helayeen waxayna Madrid u muuqatay kuwo aan si deg deg ah kubbada iskugu dhiibi karin halka Ajax ay cadaadis badan abuuraysay.
Daqadii 62 aad Dusan Tadic oo Real Madrid burburiyay ayaa dhaliyay gool saddexaad ee Ajax kaas oo isna ahaa gool kale oo qurux badan kadib markii uu caawin ka helay van de Beek isla markaana uu Dusan Tadic kubbada ku dhaqaajiyay shabaqa Courtois ee dhibahana noqday wuxuuna Dusan Tadic sidaa ugu lug yeeshay saddexda gool ee ay Ajax dhalisay oo uu labada hore soo caawiyay waxayna ciyaartu noqotay 3-0 ay Ajax ku dubanayso Madrid oo Bernabeu joogta!!.
Daqiiqadii 68 aad Gareth Bale ayaa helay fursad gool dhalineed laakiin darbo uu lugta midig ee diciifka ah u sameeyay ayuu goolhaye Onana awooday in uu isna lugta isaga saaro, waxayna ahayd fursad gool lagu dhalin karayay.
Daqiiqadii 70 aad Marco Asensio ayaa ugu danbayn dhaliyay goolka furitaanka Real Madrid ee ay farqigii goolasha saddexaad ahaa iskaga soo yaraysay wuxuuna u muuqday gool albaabka u furayay rajada ay Madrid soo laabasho ka qabtay wuxuuna Asensio goolkan ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay Sergio Reguilón.
Ciyaarta ayaa noqotay 3-1 ay Madrid rajo ku abuuratay balse ay wali shaqo waynu hadhsanayd, laakiin Ajax ayaan wax walwal ah iyo cabsi ah muujin waxayna bilaabeen in ay heerkii ugu sareeyay ku sii ciyaaraan.
Daqiiqadii 72 aad Alla Muuxu Gool ahaa! Rajadii Real Madrid ee goolka Asensio ayaa noqotay hal bacaad lagu lisay kadib markii uu Lasse Schöne awooday in uu kubbad laaga xorta ah si toos ah ugu dhaliyay goolka afraad ee ay Madrid ceebta ka sii qaaday, iyada oo goolhayaha bilaa tamarta noqday ee Courtois uu awoodi waayay in uu wax badbaadin ah u sameeyo kooxdiisa.
Goolka layaabka leh ee uu Lasse Schöne dhaliyay waxa uu ciyaarta ka dhigay 4-1 ay Ajax ku gumaadayso Real Madrid oo marti loo yahay, waxayna markan Madrid bilawday in ay xaqiijisato in waxa dhacayaa uu yahay wax ayna marnab maskaxda ku sii sawiran. Wadarta labadii kulan ayaa noqotay 3-5 ay Ajax si wayn ugu gacan sarayso.
Daqiiqadii 82 aad Alla maxay Fursad lumin ahayd! Luka Modric iyo Karim Benzema ayaa kubbad kaga soo guulaystay Frenkie De Jong oo qalad sameeyay laakiin kubbada ay goolka la soo dhex galeen ayuu Modric isku dayay in uu Benzema siiyo si uu xariiqda iyo goolhayaha kubbada u dhaafiyo balse kubbada ayaa daba martay Benzema waxana helay Bale laakiin waxa uu ku ku dhuftay goolhayaha Ajax oo badbaadin kale oo cajiib ah sameeyay.
Daqiiqadii 86 aad Sidayna Gool U Noqon? Luka Modric ayaa si lama filaan ah kubbad ugu lumiyay laakiin Hakim Ziyech ayaa kubbad uu ku hor helay goolka Madrid birta dul mariyay.
Intii lagu jiray shan daqiiqo oo ciyaarta lagu daray Nacho ayaa cadhadiisa xakamayn kari waayay isaga oo sida musaaricada dhulka u dhigay ciyaartoy Ajax ah waxaana loo taagay kaadhka cas.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 4-1 ay Ajax ku xasuuqday Real Madrid isla markaana ay Los Blancos kaga cidhibtirtay tartanka UEFA Champions league ee ay Madrid ku soo guulaysatay saddexdii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay.
Los Blancos ayaa ceeb iyo caydhi kula kulantay garoonkeeda Bernabeu iyada oo sil siladii guuldarooyinka Bernabeu ay heer kale gaadheen, waxaana loo arkaa in xili ciyaareedkii Real Madrid uu maalmo kooban ku soo gaba gaboobay iyada oo hadda mustaqbalka Solari uu miiska saaran yahay.
Dhinaca kale kooxda Tottenham ayaa Ajax kula biirtay wareega siddeed dhamaadka Champions League waxayna Tottenham awooday in ay markale guul ka gaadhay Dortmund iyada oo 1-0 guul kale ku gaadhay iyada oo wadarta labada kulan guul ku gaadhay 4-0.
Kooxaha Ajax & Tottenham Oo Siddeed Dhamaadka UCL U Soo Baxay added by admin on March 6, 2019